मोटरसाइकलको ठक्करबाट प्रदेशसभा सदस्य गम्भीर घाइते
कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापा सडक दुर्घटनामा परेर घाइते भएकी छन्। धनगढी–८ बुद्ध चोकमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेकी हुन्। बुद्धचोकबाट जुगेडातर्फ जाँदै गर्दा मोटरसाइकल सवार उनलाई पछाडिबाट अर्को मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो।
मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते भएकी उनको उपचारका लागि धनगढीस्थित माया मेट्रो अस्पतालमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं लगिन थालिएको छ।
उनको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य थापा कांग्रेसबाट अछाम जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद हुन्।
सुदूरपश्चिमकी सांसद अम्बिका थापा सवारी दुर्घटनामा घाइते, थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिँदै
मोटरसाइकल दुर्घटनामा प्रदेशसभा सदस्य थापा घाइते
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य अम्बिकुमारी थापा मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भएकी छिन् । कैलालीको धनगढीबाट जुगेडातर्फ जाँदै गर्दा पछाडीबाट आएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएपछि उनी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । उनको टाउकोमा चोट …
सुनसरी : इनरुवा नगरपालिका ६ स्थित सडकमा मे ९ प १८७२ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएर अन्दाजी ५० वर्षीय साइकल यात्रु एक पुरुषको शनिबार बिहान मृत्यु भएको छ। मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका ती पुरुषको जिल्ला अस्पताल इनरुवामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चाल...
मोटरसाइकलको ठक्करबाट मृत्यु :: Pahilopost.com
पर्वतः पर्वतको फलेबास नगरपालिका वडा नं ५ खानीगाउँकी एक महिलाको मोटरसाइकलको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ। शनिबार साँझ ६ः३० बजेको समयमा स्थानीय ५० वर्षीया विष्णुदेवी दर्जीलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो। मादक पदार्थ सेवन गरी तीन जना सवार ध १ प ३६६६ नंको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएकी दर्जीलाई उपचारका
मोटरसाइकल दुर्घटनामा बालकको मृत्यु
सर्लाही : हरिवनमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। हरिवनबाट घुर्कौलीतर्फ जाँदै गरेको ज. १२ प. ६०८२ नम्बरको मोटरसाइकलले विपरीत दिशाबाट आइरहेको साइकललाई ठक्कर दिँदा साइकल सवार हरिवन नगरपालिका–६ घुर्कौलीका १२ वर्षीय युनिक तामाङको मृत्यु भएको हो। दुर्घटना घाइते भएका युनिकको हरिवनस्थित नमुना असपतालमा ...
टिप्परको ठक्करबाट मृत्यु :: Pahilopost.com
गाईघाट: उदयपुर गढी गाउँपालिकाको मदनभण्डारी लोकमार्ग खण्डको नेपालटारमा आज बिहान टिप्परले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलको पछाडी सवार एकको मृत्यु भएको छ भने चालक गम्भिर घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा उदयपुर गढी गाउँपालिका–७ का बासिन्दा ४८ वर्षीय बलबहादुर मगर छन् भने मोटरसाइकल चालक मगरकै छोरा सुजन गम्भीर घाइते भएको जिल्ला
चितवनमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु, एकजना घाइते :: Pahilopost.com
चितवनः चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ९ आँपटारीमा गएराति बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। गएराति सवा १२ बजे ना ७ ख १६ ४२ नम्बरको बसले ना ६१ प २२३७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट चालकको मृत्यु भएको हो। मोटरसाइकल पछाडि सवार एक व्यक्ति घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते
टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल पछाडि सवार श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् घाइते :: Pahilopost.com
पहिलो पोस्ट आश्विन २०७५
मोटरसाइकलको ठक्करबाट ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरी घाइते
सुर्खेत : सुर्खेतमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक ट्राफिक प्रहरी घाइते भएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ७ गौजनी मोडमा भे७प ४६५४ नम्बरको मोटरसाइकले ठक्कर दिँदा ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरी जवान कुलबहादुर शाही घाइते भएका हुन्। तीन जना सवारी रहेको मोटरसाइकलाई ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले रोक्न खोज्दा मोटरसाइकलल...